Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): June 2013
at 6/30/2013 10:35:00 AM
Mungkan Mung masa hpaji chyechyang kung hpan nga u yaw.., Aung San a-bawnu.., Myen a-bawnu hpe n-dang kau ai a-majaw..,Dai ni du hkra A-Myu. Lamu ga., Labaw Myen a-lata kaw rai mat ai.. gade hkrat sum mat sata.....?
Dai ni.. Myiwa hpe kam .., Jinghku shatai n-na Mungdan hta Rawt jat kalu. Aung dang nga ai Mungdan, Mungkan hta gara Mungdan re NI......,? Madi madun yu marit..,
Lapran Masha tai ai wa gaw.. Ting gyeng a-kyu n-tam ai wa rai ra ai..,Lapran hta rap ra ai hku chye hpa ran ra ai.. Dingman ai wa rai ra ai..,Myiwa shi a-ting greng a-kyu a-matu Myen hpe gade garum tawn n-na Jinghpaw hpe gade jawm sat zingri masai ,Jinghpaw Mungting wa rai nga ai....,
Jinghpaw hpe Myiwa wa teng teng a-tsawm she garum u.. UWSA.., hpe zawn garum u..., Myen ni Jinghpaw makau n-lu shani ai...,Dai ni Myen wa Jinghpaw Munghpe Myiwa a-lata kaw Pawng sha(dut sha) tawn nga sai...,mu nga a-ni.....?
Ya hpa rai Jinghpaw hte Myen a-lapran Myiwa shang wa a-ta....,?
Sinna Mungdan ni Myiwa shi makau Anhte Jinghpaw hte raunga na hkrit ai.. Bai ya yang USA.., ni a-lak nak n-nan Myu lahkawng galaw awngdang ma nu ai ..
Myiwa dai lak nak hpe Mung grai hkrit tsang ai.., shi grai chye mayu lu ai..,Dai majaw mung myiwa gaw USA. a-computer online system hpe Attack (hack) galaw ai lam rai nga lu ai.
Dai ni Mungkan hta.., UK.., USA.., hte EUROPE.., Mungdan ni hte kamhpa.., Jinghku shatai ai ni MATSAN taw.., nga ai Mungdan gara Mungdan re ni....,? Madi madun yu marit...,
Dai ni Jinghpaw hte Myen a-lapran hta UN.., sa lawm n-na hkum kabu masu...,UN.., shi hpa lak nak n-lu ai..,POWER n-nga ai..
SYRIAN.., Mungdan na ding hku majan hpe UN.., kawn hparan yang.., china., Irian..,Russia.., ni ning hkap ai majaw.. n-mai hparan ai .., Dai majaw..,Syrian.Friend ngu ai hpung pru wa ai.., Dai kaw.., USA..,UK.. Kata.., Saudi ..., Mungdan ni hte kaga ni naw shang lawm nga ma ai Mu nga n-ni...?
Seng Maran( sengging@gmail.com )
Naw matut na
at 6/30/2013 09:51:00 AM
ဂေါင်းစဉ်က တော်လှန်ရေးဆိုတော့ ကျနော့ကို တော်လှန်ရေးသမားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ကျနော်ဘာမှမသိသူပါ၊ ကျနော်စိတ်မှာခံစားနေရတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လက်ကမြင်းတာပါပဲ၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာ စနစ်တခုကိုဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ရပ်တခုကိုဖြစ်စေ မကြိုက် မနှစ်သက်ခဲ့ရင် တော်လှန် မောင်းထုပ် တိုက်ပွဲဝင်ကြခြင်းပါပဲ၊ ဉပမာ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ဂျပန် ကိုလိုနီ မျိုးတွေလို အဖက်ဖက်မှ ယုတ်မာ ပက်စက် ကြသူတွေကို ရရာလက်နက်ကိုင်ကာ ကျွန်ပြုခံ လူ့ဘဝ ၌ ရှင်သန် နေရခြင်းထက် သေရခြင်းက မြတ်၏၊ ဟူ၍ လက်ခံလာကြရာမှ အစပြု လာခြင်းဖြစ်တယ်၊ ထိုနည်းအတူ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း ပြည်နယ်အသီးသီးကို လူမျိုးတစုက ကျွန်ပြု စိုးမိုးခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ ဟာ ရရာ လက်နက်ကိုင်ကာ တော်လှန်မောင်းထုပ် လာခဲ့တာဟာ နှစ် ခြောက်ဆယ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား တပ်မတော်တွေဟာ ဒီနေ့အထိ အောင်ပွဲမခံ နိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဗမာတပ်မတော်ရဲ့ ဂေါင်းဆောင်တွေလို ဉီးနှောက် မကောင်းလို့ပေါ့ ပြီးရင် ပြတ်သားမူ မရှိလို့ပေါ့ ဗမာဂေါင်းဆောင်တွေဟာ စစ်တိုက်တာ နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိပါပြီ၊ ဗမာလူမျိုး တထောင်ပြည့်အောင် မသေ သေးပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းကိုသာ ဟိုဖက် ဒီဖက်လှည့်ပြီး အချင်းချင်းသေခိုင်းနေတာပါ၊ ဗမာ့တပ်မတော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရှိပါတယ်၊ ဒီလူတွေကလည်း အရိုးကျွေးတာနဲ့ သခင်ကို ကာကွယ်ကြမယ် ဖြစ်သွားတော့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်တိုင်းပြည်ဆိုတာ မသိတော့ဘဲ စွမ်းစွမ်းတမန် သေပွဲဝင် တော့တာပါပဲ၊ ဗမာ့ဂေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲသေသေ ဗမာသေတာ မဟုတ်ဘူး၊ အပြုံးမပျက် စိန်လက်စွပ်နဲ့၊ ခန့်ညားထေဝါ လက်ထပ်လာဝယ်၊ ဗမာဟေ့၊ ရယ်လို့ သောင်းသောင်းဖျဖျ ပျော်မြုံးနေကြတုန်းပါပဲ၊ ဒါဟာ ဗမာ့ဂေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပြတ်သားမူတွေပဲ၊ တိုင်းရင်းသားဂေါင်းဆောင်တွေလို့ တော်လှန်ရေး တော်လှန်ရေး နဲ့ တကျပ်မပြည့်တဲ့ ရွှေတမတ်သားကို လုနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီကလူတွေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမယ်၊ သွားလာခွင့်ပေးမယ်၊ ဘာညာ ဆိုရင် နောက်ပြန် လှည့်မကြည့်ပဲ ပြောသမျ ဂေါင်းငုသွားကြတယ်၊ ဒါကြောင့် အင်အားရှိသမျတိုင်းရင်းသားတွေဟာ အင်အားနည်းတဲ့ လူ့ဖဝါးအောက်မှာ ပြားပြားမှောက်ကြရတယ်၊ ပြည်သူ့ပေါင်းများစွာလည်း ကိုယ်မွေးတဲ့နေရာ ရှိလျှက် နိုင်ငံတကာမှာ ခိုလုံခွင့်တောင်းကြရတယ်၊ အရွယ်မဆန့်သေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း တိုင်းတပါးမှာ ဖာဖြစ်ကြရတယ်၊ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူညီသလိုလိုနဲ့ ဗမာအမျိုးသားလေးတွေဆီမှာ ဒုတိယ မယားအဖြစ် ပွဲတော်တင်ခြင်း ခံကြရတယ်၊ ဒါလည်း ရွှေတမတ်သားလုပွဲ အဆုံး မသတ်နိုင်သေးပါဘူး၊ ဒါကြောင့် (တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ) ဆိုတာကို သိချင်လွမ်းလှပါပြီ၊ ပါတီပြိုင်ပွဲလား၊ အချင်းချင်းသတ်ပွဲလား၊ ကုတင်လုပွဲလား၊ နိုင်ငံရေးသိပ်ပံစာအုပ် အဖတ်ပြိုင်ပွဲလား၊ သူရဲဘော ကြောင်လို့လား၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ပန်းပေါက်တန်းကစားတာ မဟုတ်တော့ ပျော်ဖို့ မကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ပြုခံ ဘဝ ၌ အသက်ရှင်သန်ခြင်းထက် သေခြင်းက ပိုမြတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် နေရာမှန် လူမှန် နဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ဗမာ့ ကိုလိုနီ ကျွန်ပြု စနစ်ကို တိုက်ထုပ်ကြပါရန့့် 
မခံနိုင်လွမ်းလို့ပါ။ ဆရိန်ရနဒီ ကျော်မင်းခိုင်
at 6/30/2013 09:46:00 AM
Christian Solidarity Worldwide (CSW) has learned thataKachin civilian named Zahkung Lum Hkawng was tortured, beaten and shot dead by the Burmese Army in Northern Shan State on 14 June. The killing occurred just weeks after the Burmese government and the Kachin Independence Organisation (KIO) signedaseven-point agreement in Myitkyina on 30 May.
On the night of 14 June, Zahkung Lum Hkawng, aged 45, was taking his turn asasecurity guard for his village, Nawng Hen, when Burmese troops entered the village and demanded that the village head provideaguide for them. Lum Hkawng was forced to accompany the troops to Mung Ya Hka Zup village where they clashed with the Kachin Independence Army (KIA), the armed wing of the KIO. The Burmese Army troops accused Lum Hkawng of deliberately leading them into an ambush. They beat and tortured the victim and before shooting him dead.
On the same day, an unnamed villager was killed by the Burmese Army at the road between Nan Gat and Ying La villages. A group of villagers from Nawng Hen who went to retrieve the victim’s body were stopped by Burmese Army troops at Nan Gat village and told that they were not allowed to go any further. The same afternoon another round of fighting took place between Burmese troops and the KIA, giving the neighbours the opportunity to take the victim’s body back to his remaining family members, including his elderly mother, wife, and six children.
THE UNITED STATE IS NOT A DEMOCRACY IT'S A REPUBLIC
at 6/29/2013 10:36:00 AM
BY: One Nation Under God
READ MORE +++CLICK ON LINK++
at 6/28/2013 11:46:00 AM
Ahkyak Hta Grau Ahkyak Ai Aten Daw (1).
at 6/27/2013 11:09:00 PM
(1) Tinang Amyu hte Mungdan ngang grin nga hkra tsawra makawp maga da mayu ai myit.
(2) TinangaMungdan hte Amyu Shanglawt na hpe ra sharawng ai myit.
(3) TinangaMungdan hte Amyu hpe rawt galu kaba wa shangun mayu ai myit.
(4) TinangaAmyu sha ni hpe myit hkrum kahkyin gumdin nga shangun mayu ai myit.
(5) TinangaMyu hte Mungdan hta arawng la chye ai myit.
(6) TinangaMyu hte Mungdanamatu tinangaAsak, tinangahkum hte tinanganga mu/mai lam yawng hpe ap nawng kau lu ai myit.
(7) TinangaMungdan hte Amyuantsa tut nawng dinggrin sadi dung ai myit ni yawng lawm nga ai.
NINGGAWN MUNG MASA LAM
တိုင်းရင်းသားများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ရေရှည်စီမံကိန်းရှိနေ
at 6/27/2013 11:07:00 PM
Thursday, 27 June 2013 14:34 စွမ်မိဏ်း
အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး စွမ်မိဏ်း
၂၇ ဂျွန်လ ၂၀၁၃
(ဤပြောကြားချက်သည် သျှမ်းသံတော်ဆင့်၏ အာဘော်မဟုတ်။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၏ သဘောထားသာဖြစ်ပါ သည်။ (အယ်ဒီတာ))
ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသမှူးက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်က ရေရှည်စီမံကိန်းဖြင့် ဖျက်ဆီးနေမှုကို တင်ပြချင်ပါ သည်။
၁- ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့နေထိုင်သော ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမှ လိုင်ဇာအထိ၊ ဗန်းမော် မှ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်အထိ ဒေသတို့တွင် ဒေသခံ ကချင်လူထု အေးချမ်းစွာ မနေနိုင်အောင် မြန်မာစစ်တပ်က စီမံကိန်းကျကျ ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်နေပါသည်။
၂- သျှမ်းပြည်တွင်လည်းအလားတူ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါ-ကျောက်မဲ- လားရှိုး-သိန္နီ-ကွတ်ခိုင်- မူစယ်-နမ့်ခမ်း-မုံးဝီး တွင်ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်လာကြသော ဒေသခံများ ကို တရုတ်နယ်စပ်မှ မန္တလေးမြို့အထိ ဟိုင်းဝေးကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မည့်စီမံကိန်းကြောင့် နှင်ထုတ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပါသည်။ မရွှေ့ပြောင်းပါက အကြောင်းတခုခုရှာကြံ၍ မနေ နိုင်အောင် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်အောင်အနှောင့်ယှက်ပေးနေမည်မှာဖြစ်ပါသည်။နယ်မြေမတည်မငြိမ်ဖြစ် လာပါက မြန်မာ့တပ်မတော်မှ နေရာယူရန် ပို၍ အဆင်ပြေလာသဖြင့် ၎င်းတို့ ဝင်ရောက်နေရာယူလို သည့် ဒေသအတွင်း လူထုအား အနှောင့်အယှက်ပေးရန်ဝန်မလေးပေ။
၃- ဒေသခံလူထု မနေတော့ရင် တခြားကိုပြောင်းရွှေ့ပြီဆိုရင် ဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ လဲ နေ နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ ထို့အချက်ကိုအဓိကထား၍ ကချင်ပြည်နယ်က ကချင်တပ်မတော်အား မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ၂၀၁၁ ကစ၍ တိုက်ခိုက်လာခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းလူထု ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဆိုပါက အောက်ပြည်အောက်ရွာမှ ဗမာများအားခေါ်ယူကာ နေရာပေးသဖြင့်အိမ်ရှင် ၏လယ်ယာမြေများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အလားတူ ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း ရပ်တကာဈေးလှည့်ရောင်း နေသော ၎င်းတို့၏ ထောက်လှမ်းရေးများပျောက်ဆုံးမှုမှာ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် နောင်မတာအုပ်စု အခြေစိုက် မိမိတို့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသ၏လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲကာ အင်အားသုံး၍ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အမှန်မှာ နောင်မတာရှိစခန်းမှာ သျှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၏ ဌာနချုပ်မဟုတ် တပ် သားများနေထိုင်သည့် တပ်စခန်းလည်းမဟုတ်။ ဧည့်သည်ကြိုဆိုရေးစခန်းတခုသာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျေးလက်ဒေသခံလူငယ်များ၏ ပျက်စီးနေသော အကျင့်စာရိတ္တများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမည့် စခန်းဖွင့်ရန်နှင့် ဒေသခံများအတွက် ဆေးပေးခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးရန်နေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စခန်းကို မေလ ၁၂ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ် စစ်ဒေသမှူး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးစွမ်မိဏ်း နှင့်လုံခြုံရေးတပ် အဆိုပါစခန်းသို့ ကြိုတင်ရောက်ရှိ နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို စခန်းဖွင့်ရန် ၃ ရက်အလို မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်တပ်က အင်အား သုံး၍ ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ပါလို့သာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄- တကယ်တော့ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် စီမံကိန်းရှိပြီးသားပါ။ မိုးမလင်းခင် ကျနော်တို့ စခန်းထဲဝင်ပြီး သက်ရှိဆိုသမျှ ပစ်သတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်မိုးမလင်းခင် စခန်းမှ တပ်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါ- ဟု သူတို့ အချင်း ချင်း သတင်းပို့ထားပြီးသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၉ ရက်နေ့ မနက် ၁ နာရီလောက်မှာ ရွှေလီမြစ် ကူးတို့ဆိပ်ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ရောက်ရှိလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ လုံခြုံရေးတပ်များလည်း ကူးတို့ ဆိပ်တွင်သွား၍ ခုခံပါသည်။ မနက် ၃ နာရီ ၎င်းတို့ စစ်ကြောင်းမှူးနေလင်းအောင်ကိုယ်တိုင် ရောက်လာ ၍ ကူးတို့ဆိပ်ကူးကာ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကူးလာကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ရာ လူထု အတွက်စိုးရိမ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စခန်းကခွါပေးလိုက်ရသည်။ သူတို့အကြံမအောင်မြင်တဲ့အတွက် နောက် ဆုံးတော့ ကျနော်တို့ကို မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်၊ ရောင်းဝယ်သည်ဟု မြန်မာအစိုးရ၏ မီဒီယာမှ ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြန်သည်။ ကျနော် စစ်ဒေသမှူးကိုယ်တိုင် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာ တွေ ပညာရှင်တွေ အာဏာရှင်တွေ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဒါမှ မြန်မာ့ တပ် မတော်သည် တိုင်းပြည်လူထု အပေါ် မည်သို့ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်နေသည် ဆိုတာ ဒိဌ မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါသည်။
၅- မြန်မာအစိုးရနှင့် တပ်မတော်သည် အပြောနှင့်အလုပ် လုံးဝ မညီပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလား တယ် ဆိုပြီး လက်ကမ်းလာသည့်မြန်မာအစိုးရကို ငြိမ်းချမ်းရေး အမှန် တကယ် လိုလားသည့် တိုင်းရင်းသား တိုင်းက သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့တိုင်း အဖွဲ့တိုင်း အပစ် ရပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်လိုကြသည်။ သို့သော် မြန်မာ့တပ်မတော်ကမူ အဆိုပါ အပစ်ရပ်ပြီးသောအဖွဲ့များအား ပြဿနာ ပြန်ရှာ၍ ပြန်တိုက်ခိုက်နေ သည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်ပေသည်။ ဥပမာ KIA ကချင်တပ်မတော်သည် မြန်မာတပ်မတော်နှင့် အပစ်ရပ်သဘော တူထား သည်မှာလွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကတည်းက ပင်ဖြစ်သော်လည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြား ယနေ့တိုင် တိုက်ပွဲများ ဆက် လက်ဖြစ်ပွါးနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခု ၂ နှစ် ၃ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သော တိုက်ပွဲကြား အပစ်ရပ်ရေးကို တပြိုင်နက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ ၈ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တိုင် အပစ်ရပ်ခြင်း သဘောမတူနိုင်သေးပေ။ ကချင်တပ်မတော်ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနှင့် ၃- ၄ ကီလို အကွာရှိ ၎င်းတို့၏ ရှေ့တန်းတပ်စခန်းများကို လုံးဝ ဆုတ်ခွါပေးခြင်းမရှိဘဲနှင့် မြန်မာ့တပ် မတော်ကို ကချင် တပ်မတော်က အဘယ်သို့ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မည်နည်း မဟုတ်ပါလား။ တခြားသော နေရာဒေသ များ ကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ခေါင်းပုံဖြတ် အနိုင်ကျင့်ခြင်းမခံရသည့်ဒေသ ဟူ၍ မရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့အပစ်မရပ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုလည်း ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်လိုတဲ့တပ်ဖွဲ့လို့ ပြောပြန်တယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုသတိပေးလိုက်ချင်တယ်။ ပြည်ထောင် စုကြီးကို ဘယ်သူကစတင်တည်ထောင်တာလဲ။ မေ့နေကြပြီလား။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ က ဘဲစတင်တည်ထောင်တာဘဲလေ။ သျှမ်းစော်ဘွား စဝ်ရွှေသိုက် ဘဲလေ။ ပြည်ထောင်စုကို အာဏာ သိမ်းလိုက်တာ ကကော် ဘယ်သူလဲ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘဲလေ။ သျှမ်းစော်ဘွားတွေကို ဘယ်သူက ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်လိုက် တာလဲ။ မြန်မာတပ်မတော်ဘဲလေ။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ပြောသလို ပြည်ထောင်စုကိုဖြိုခွဲချင်နေတာ တိုင်းရင်းသား တွေ ဘဲ- ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။
အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသမှူး
at 6/27/2013 08:28:00 PM
Despite the agreement reached between the GoM and KIO, there has beenaseries of fighting between Burmese troops and the KIA troops recently onadaily basis in KIA’s 4th bridge area
at 6/27/2013 08:18:00 PM
Despite the agreement reached between the GoM and KIO, there has beenaseries of fighting between Burmese troops and the KIA troops recently onadaily basis in KIA’s 4th bridge area. The agreement point 2(b) stated that “the parties agree to undertake efforts to achieve de-escalation and cessation of hostilities”.
Tatmadaw Burmese army bombardment on 18 June 2013, Mungbaw - Mungseng area in Northern Shan, KIA 4th Brigade area destroyed village/houses belonged to (1) Mr.Nhkum Hkun Hpung, (2) Mr. Jinghpaw La and (3) Mr.Marip Brang.
You are witnessing the commitment of peace from the Myanmar government side.
This atrocity is war crimes against the Kachin civilians. We urged the international community to refrain from Business engagement in Burma and stop supporting the Myanmar government state-sponsored terrorism in one way or another.
at 6/27/2013 07:54:00 PM
LAGANG:- Ndai laman brawng pru wa ai shiga ni gaw, mungmasha ni jawm ra sharawng nga ai simsa lam lu wa sana nga ai shiga hkrai hkrai na lu ai. President Thein Sein tsun yang rawt malan hpung 11 kaw na hpung 10 gaw simsa lam la masai da. KIO sha ngam sai raitim 2013 July shata kaw gaw mungdan ting ngwi pyaw simsa wa na sai da. Shawa masha ni kaw na Myen ni zing la tawn ai hting ra hte yi sun hkau na ni pyi bai nhtang ya sana lam hte constitution mung gram ya na sai lam tsun nga masai.
Shing rai Ma Kaw jan pyi gaw President byin wa na matu myit mada nga ai ten mung rai nga sai. Rawt malan hpung ni mung simsa lam la nna mungmasa party hpaw let 2015 ning na ra lata poi kaw shang shingjawng na matu myit dating nga masai. Maigan mungdan hkan na sahti ni gaw arang kaba shaw nna Myenmung hpe jawm gaw-sharawt ya na masai da. Dai ni na ten hta Thein Sein woi awn nga ai asuya gaw mungmasha niamatu prat chyanat rai n lu yu ai ahkaw ahkang ni jaw na sai majaw kabu hpa shiga hkrai na lu nga sai. Deantsa e, salang nan gaw gara hku mu ai lam jahta dan yu marit le.
PYILAN:- Maigan masha ni gaw laika hpaji chye nna grai zen ai ni rai ma ai. Raitim shanhte gaw mungdan ngwi pyaw simsa sai lam Thein Sein ndau nga ai hpe kam let arang kaba ni Myenmung kaw sa shaw nga masai. Dai zawn rai tsun garu nga ai ningmu amyu myuantsa sagawn yu na matu mungdan jut shagu kaw hkan pyen gawan hkawm yu yang, kam ya na zawn re ai hte kam yak na zawn re ai in hpe kayau gaya mu lu ai. Dai zawn rai myit ung-ang shangun ai hpe asan brang rai shen maram sanglang dan na matu hpaji ninghkring Salang Prangtai hpe mahtang lajin mayu ai.
PRANGTAI:- Ndai lam hte seng nna nam-up up chyai let, dingla ni shadaaningmu garan kachyan jahta chyai hkat ai hku mahtang di ga le. Ka matsing lit la ya nga ai Salang Puk Dun hpe lajin mayu ai gaw, masha ni madat yang n manu dum na zawn re ai ga si ga ngau ni n ka shalawm na matu re.
Anorahta hkaw hkam prat kaw nna dai ni na Thein Seinalakhtak du hkra Myen asuya ni hte myit hkrum lam laili laika hku nna mung, n-gup aga hku nna mung hkam dahka sadi tawn wa ai hpe hkan shadik shatup ai lam rai n mu yu ai. Shanhte tsun ai hte ta tut galaw ai gaw, wa shakap shai rai, kaga ga rai wa sai. Shing re ai majaw dai ni du hkra rai yang Myen asuya tsun ai hpe kam nna, la nga ai niamatu gaw, "U Hkuamasa si la gawm" sha arai wa masai. Yu mu le, aten galu hta Miwa hpe gara hku la gawm shangun wa sai. Matut nna gara hku naw la nga shangun ai. Sinna mungdan ni Myenmung hpe economic sanction dam ari jaw tawn ai kaw na shalawt dat ya na matu gara hku ladat shaw ai. Dai hpang sinna masha ni gaw Myenmung hpe kade daram garum bang wa nga masai hpe asan sha jawm mu nga saga ai.
Myen asuya shangwang kata na ta tut bungli hpe maram yu ga. Lunghkrung npu kaw dung nga ai jahtung nat gaw, remote control shingna kaji kaba lang tawn nna shi ra sharawng awng ai maga de madi dat dat re ai ladat hte shi rem tawn ai ni hpe shangun sha taw nga ai. Shing rai shianpu na shangun ma ni kadai raitim, shanhte htaphtuk dum ai hpe galaw na malai, shanhteaasak madu jahtung wa madi madun dat ai hpe sha hkan shadik shatup nga ma ai. President yan Ma Kaw jan hpe jahtuk ya ai mahkrun hku nna sinna masha ni ra sharawng ai hku ka manawt dan nga shangun nna, hpyendap uphkang du hpe gaw dingdung-sinpraw jut na ni hpe shanyam magang nga shangun nga ai. Rohingya manghkang, Letpadaung, Meikhtila, Lashio manghkang, rawt malan hpung ni hte seng ai manghkang niamatu lang ai remote control ni gaw kaga laksan rai nga ai hpe mung mu lu ai. Dai manghkang ni gaw jahtung wa nan shalat la nna, hpangegaw shazim ra sai lam tau nna hkyen lajang tawn magang sai hte maren ahkyak la wa sai.
Shing re ai hta hkan nna, kalang mi President ndau ai hta:- "Hpawt de manap hkying6kaw nna Mai Ja Yang grup yin hkan majan gasat lam hpe tsepkawp jahkring dat sai" nga ai. Hpawt de manap du ai shaloi hpyen hpung n-gun kaba jat bang wa nna laknak kaba ni hte marang htu ai zawn gap sharu bun wa masai. Dai hta n-ga, helicopter gunship ni hte shang gap wa ai kaw jet nbungli ni gaw rocket hte gap, bawm ni jahkrat sharu bun wa masai.
Dai ni sha hpyendap jahkrat ai ginra ni, gap hkat jahkring ai ga sadi ni galaw la lu sai hpu nau Sam hpyen hpung ni hpe hpawt ni jang nan, Myen ni myit hkrum nna jahkrat tawn ai Sam hpyendap shara hpe htawt mu nga nna matsun jaw wa masai. Sam ni gaw myit galu gun let htawt ya nna shara nnan kaw hpyendap bai shachying wa ai hpe bai htawt shangun ai shaloi n htawt ya ai majaw Myen ni gaw asuya jaw ai matsun hpe n madat ya ai nga hkam la nhtawm majan gasat bang wa masai. Lachyum gaw, dai ni jaw ai ahkaw ahkang hpe hpawt ni bai dawm la ai lam rai nga ai.
Myenmung ting na rawt malan hpung ni yawng shang lawm ai uhpung hpe shachying la ra sai lam KIO Ginjaw zuphpawng kaw daw dan ai hte maren UNFC hpe lu hpaw shabawn dat lu sai. Myen asuya gaw dai UNFCadam lada kaba wa nga ai hpe na chying hkrit tsang ai majaw jahten sharun kau lu na matu jut shagu de na si mani ai ladat hte masawp nga sai. Hpaji ninghkring ni hpe masawp shangun ai nga yang, UNFC na hpung kaji kaba nkau pyi hkan byawng nang wa magang sai lam na chye lu ai.
Hpung nkau gaw Nepyitaw kaw zuphpawng sa shang lu ai hpe na chying arawng la nga ma ai. Kaja sha nga yang, Nepyitaw kaw du ai gaw, shup jahkraw kau katut ai lachyum sha re. Dai zawn rai Nepyitaw kaw woi hpawng shaman ai gaw hpang lani UNFC hte mungmasa bawngban ai shaloi Nepyitaw kaw hpawngchyawm lu hkra tau nna ladat shaw magang ai re. Hpa majaw KIO ni myit ja nga ma ai kun? Hpa baw hpe naw myit mada nga ma ai kun? nga nna myit mau nga ai ni mung nga malu ai. Raitimung, mungmasa myi mu ai niamatu chyawm gaw, asan sha mu ya nga ma ai.
Masha nkau tsun wa ai hta:- "KIO gaw shanhtealagaw kaw sha tsap nna yu ai ni nre. Mungdan ting ngwi pyaw simsa lam lu wa na matu shanhte rawt malan nnan hpang wa ai shani kaw nna uhpungamying hpe jahtuk shamying ai hta, INDEPENDENCE ngu ai ga hkaw shalawm wa masai. Lachyum gaw, Kachin amyu niamatu sha nre, mungdan ting hpe hkanghkyian-gup kaw na shalawt la lu na matu yaw shada let shamying ai she rai malu ai. Dai majaw UNFC ngu ai uhpung hpe hpaw shachying dat aiayaw shada lam mung lachyum langai sha rai malu ai. Mungkan kaw chyam bra nga ai Wunpawng Myusha ni gaw shanhte hte ni nawn dep hkap lu ai kaga bum nga masha ni hpe hpu nau ni hku nna tinangaamyu ni mu ai mungmasa ningmu hkan mu lawm nna myit hkrum mang rum rai UNFC hpe jawm madi shadaw lu na matu mahkrun tam nna jahtuk la lu ai rai yang, ngangkang ai uhpung kaba hpe shachying la lu na ma ai.
PYILAN:- Salang Prangtaianingmu hta la kap nna Myen asuya kade maw sha chye ai hpe mara shagun na malai, na chying shakawn ging ai ni re ngu mu ai. La ma Myen asuya gaw shanhtealaram ai hpe mungdan ngwi pyaw simsa wa na maga de asung jashawn chye ai rai yang, Myenmung gaw shadawn shadang maram n lu hkra rawt jat ai mungdan byin wa mai ai. Raitimung masa hpe yu yang Myen asuya gaw shanhtealaram ai hpe mai kaja ai maga de asung jashawn na masa n nga ai. Mungdan tingamatu akyu jashawn lu hkra mahkrun jawm tam ra na re. Shawng nnan anhteamyusha lam hta n-gun ja wa hkra galaw ra na. Dai hpang mungdan simsa hkra galaw lu ra na. Dai hpang mungmasa lam bawng jahkrup ai hta tsaw htum ai manu hte ginchyum dat la lu na re. Dai shaloi Myenalaram ai hpe mungdanamatu mai kaja ai mahkrun hta jai lang lu nna Myenmung gaw ngwi pyaw simsa rawt jat ai mungdan byin tai wa lu na re, ngu mu ai.
LAGANG:- Salang nananingmu gaw mungdan tingamatu na chying manu rawng ai ningmu re ngu hkam la ai. Dai ningmu hpe masha wunawng uwa asan sha jawm chye na hkra jahtuk ka na matu gaw Salang Puk Dunaatsam rai na sai. Dai atsam gaw du na ra ai ten ni hta Myenmung masha niamatu mai kaja ai akyu ara rai wa u ga law.
at 6/27/2013 07:23:00 PM
BY FB-Munglai Hkyet
ရခိုင်အရေးတွေဆွ/ကချင်ကိုတိုက်/ရှမ်းကိုတိုက်နဲ့ တရုတ်စီမံကိန်းပြီးပြည့်စုံတော့မယ်/ဗမာကြီးစိုးရေးကလည်းတော်တော်လွမ်းမိုးနိုင်တော့မယ်။နိုင်ငံတကာအကြွေးလည်းတော်တော်အလျှော်ခံရပြီ။အကူအညီလည်းလက်ဝါးဖြန့်တာနဲ့ရထားတာမနည်း /မကြာခင်တော့ဗမာတွေလူပါးထပ်ဝနိုင်တော့မယ်။ NLD နဲ့အစိုးရပေါင်းကတည်းက တိုင်းရင်းသားတွေသိသင့်တယ်။၈၈ တွေကလည်းအစိုးရလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်။ကဲတိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းမညီညွတ်လို့ကတော့မွေပွေးကိုက်ခံရတော့မယ်။စည်းလုံးခြင်းဆေးဆောင်ထားပေတော့။ဘာသာတူ ဘုရားတူပေမယ့်အသတ်ခံနေရတာသတိထားကြ။ဘုရားတူ ဘာသာတူတယ်ဆိုပြီးအယုံသွင်းလာရင်နှစ် ၆၀ ကျော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုသတိမူပါ။
မြစ်ဆုံရေကာတာ အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်အစိုးရ CPI ကြိုးစား
at 6/27/2013 07:44:00 AM
by KNG news
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာဝတီမြစ် မေခ-မလိခပေါ်တည်ဆောက်နေသော မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်အစိုး၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း CPI မှ တန်ဖရဲ ဒေသခံများကိုလိုက်လံစည်းရုံးနေကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
တရုတ်အစိုးရကုမ္ပဏီ CPI ၏ ဒုဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ကာ စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရသော ပြန်လည်နေရာချထားရေး အောင်မြင်သာရွာသစ်မှ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ကော်မတီဝင် ၈ ဦးကို ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ခေါ်ဖိတ်တွေ့ဆုံကာ ရေကာတာဆက်လက်တည်ဆောက်နိုင်ရန် ၄င်းတို့၏ထောက်ခံမှုအရေးကြီးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု အောင်မြင်သာရွာ ဥက္ကဌ ဦးလာရမ် ကပြောသည်။
“ရွာသားတွေကတော့ ခင်ဗျားတို့ အခုထိ ရေကာတာစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ဖို့ မျှော်လင့်နေသေးလား ဆိုပြီးမေးတယ်။ CPI ဖက်က မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဖြေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဒီစီမံကိန်းကို လုပ်နိုင်ဦးမယ်လို့ယုံကြည်လား လို့ထပ်မေးတော့၊ CPI က ပြန်လုပ်နိုင်မယ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဒေသခံတွေ သဘောတူမှသာ ရေကာတာကို ပြန်စနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်းပြောတယ်။ လုံးဝသဘောမတူတဲ့အကြောင်း မူရင်းနေရပ်တို့ သာ ပြန်လိုတယ်လို့ အပြန်အလှန်မေးမြန်းပြောဆိုကြတယ်” ဟု အောင်မြင်သာဥက္ကဌ ဦးလာရမ်က KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်မေလတွင်လည်း CPI အဖွဲ့များသည် အောင်မြင်သာသို့လာရောက်ကာ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ခက်ခဲများကိုမေးမြန်းကာ ရေကာတာစီမံကိန်းပြန်စမည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏အမြင်ကို မေးမြန်းခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
ထိုသို့ မြစ်ဆုံရေကာတာတည်ဆောက်ရေးကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် တရုတ်အစိုးရကုမ္ပဏီ CPI သည် ဒေသခံများကို စည်းရုံးမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ကာ အဆိုပါအောင်မြင်သာပြောင်ရွှေ့စခန်းရှိ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကော်မတီများကိုလည်း မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရာနေရာသို့ ကြည့်ရှု့လေ့လာပြီး စီမံကိန်းပြန်စနိုင်မည်ဟု ပြောဆိုမှုရှိခဲ့ကြောင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့် ကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ KDNG မှ ဒေါ်ဆိုင်းမိုင်ပြောသည်။
“သမ္မတကာလ ပြီးတဲ့အထိသူတို့စောင့်မယ်။ သမ္မတကာလပြီးတဲ့နောက်မှာ စီမံကိန်းတွေပြန်စနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ standard တွေနဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ ပြန်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောတယ်။ သူတို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီး ဒီလိုလုပ်ခြင်း ဟာ ဒေသခံတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဂရုမစိုက်တာ သမ္မတသိန်းစိန်မြစ်ဆုံရေတာကာ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အပေါ် ဂရုမစိုက်အလေးမပြုတာ၊ ဒေသခံတွေ တောင်ယာနယ်မြေတွေမှာ ပြန်လည်လုပ်ကိုင် စားသောက် နေထိုင်ခွင့်မပြုတာတွေ ဒီအရာ တွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မတသိန်းစိန်ရဲ့ ရေကာတာ ရပ်တန့်ထားခြင်းဟာ အတုအယောင် ဆိုင်းငံ့ထား တာဖြစ်တယ်” ဟု ဒေါ်ဆိုင်းမိုင်က KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
၄င်းက မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်အစိုးရကုမ္ပဏီ CPI သည် မြန်မာ အစိုးရများနှင့်လည်း ညှိနှိုင်းနေသည်ဟုသိရှိရပြီး ထိုသို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းပေါ် မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးမှပြည်သူလူထု အားလုံးပါဝင်ကာ လုံးဝရပ်ဆိုင်းရန် ဆက်လက်ကန့်ကွက်သင့်ကြောင်း KDNG အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် ကချင်လူထုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ အနုပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များက ကန့်ကွက်တောင်းဆိုမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၄င်း၏သက်တမ်းတွင် ရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟု ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခု သမ္မတသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီကပင် တရုတ်အစိုးရဖက်က စတင်လှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်။
at 6/26/2013 12:19:00 PM
A twin lu
တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် ပြည်နယ်တိုင်း ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်၊ ကိုယ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိဖို့လို- RCSS ခေါင်းဆောင်ပြော
at 6/26/2013 03:04:00 AM
တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ် ကိုယ်ပိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှိသင့်သည်ဟု တာချီလိတ်ဒေသခံများနှင့်တွေ့ ဆုံစဉ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ကပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ယမန်နေ့မနက်ပိုင်းက ဝမ့်ဟောင်ရပ်ကွက်သားတဦးအား ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က “ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ဆောက်မှုဟာ ၇ ဆင့်ရှိတဲ့ လှေကားထစ်ကို တက်နေတာနဲ့တူတယ်။ အခုကျနော်တို့လုပ်နေတာ ပထမအဆင့်ဘဲရှိ သေး တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ မိဘပြည်သူတွေနဲ့ လက်တွဲရမယ် အဖက်ဖက်က လက်တွဲရမယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ဖို့ဟာ ထွက်လမ်းပါဘဲ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ တန်းတူညီမျှရှိဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်တဲ့ မိမိပြည်နယ် အတွက် စစ်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှိလိုတယ်” ဟုပြောဆိုခဲ့ ကြောင်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်နားထောင်သူ စိုင်းပီးက ပြောဆို ပါသည်။
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ် ဦးဆောင်သော သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေးခရီးစဉ်မှာ ယမန်နေ့ ဂျွန်လ ၂၃ ရက်က သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ခရီးစဉ်အဆုံးသတ်လိုက်ကြောင်း တာချီလိတ်သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
“မနေ့က မနက်ပိုင်း ဝမ့်ဟောင် ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဟောင်လိတ်ကျောင်း တိုက်ကိုသွားပြီးဆရာတော် ကိုသွားကန်တော့ အဲဒီ မှာလဲ လူထုနဲ့ တွေ့တော့ စဝ်ယွက်စစ်ကပြောလိုက်တာ။ ပြီးရင် ဆန်ဆိုင်းတိုင်းကျောင်းတိုက် ကိုသွားတယ်။ အဲဒီမှာ တော့ စောင့်ကြိုနေတဲ့ လူထု ၅၀၀ လောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ ပုံစံလေး လုပ်ပေးတယ်။ စည်စည်ကား ကားဘဲ” ဟု တာချီလိတ်မြို့နေ စိုင်းပီး က ပြောသည်။
ဆန်ဆိုင်းတိုင်းကျောင်းတိုက်ဆရာတော်အား တွေ့ဆုံကန်တော့မှုအပြီးလူထုနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က ၂၀၁၄ အတွင်း ကျင်းပရန်စီစဉ်နေကြသည့် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံတွင် ယခင်ညီလာခံကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင် မိမိတို့အနေ ဖြင့် ယခုကတည်းက လူထုနှင့်တွေ့ဆုံအကြံညာဏ် ယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
သျှမ်းပြည်နယ်အား သျှမ်းလူထုက အုပ်ချုပ်မှုနေရာရအောင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းလည်း သျှမ်းလူမျိုးမှ နေရာရအောင်ကြိုး စားရမည်ဟုလည်း စဝ်ယွက်စစ်ကပြောသည်။
သျှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းသည့် အနေဖြင့် သျှမ်းတီဗီလိုင်း တခု လုပ်ဖို့ ဒေသခံလူထုက တိုက်တွန်းအကြံပြုရာတွင် မူ စဝ်ယွက်စစ်က - “ကျနော်တို့ကနေ တိုက်ရိုက်ထိန်းပေးဖို့ဆိုတာခက်လိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး မိသားစုတွင်းကနေထိန်းသိမ်း မှ အောင်မြင်မယ်။ လွယ်တိုင်းလျန်းမှာတော့ သျှမ်းစာ ၁၀ တန်းအထိရှိပါပြီ။ ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ဆိုသည့်အချက် သျှမ်းစာပေပညာရှင်နဲ့လဲ တွေ့ဆုံပြီးပြီ” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
RCSS/SSA အဖွဲ့၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်မှာ ဂျွန်လ ၉ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ကြာရှည်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်း၊ သျှမ်းခေါင်း ဆောင်များဖြစ်သော SNLD ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး၊ SSPP နာယက ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆေထဲန်၊ SNDP ဥက္ကဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်း၊ EBO မှ စဝ်ဟန်ယောင်ဟွေ့၊ NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့အပြင် မန္တလေး ကျောက်မဲ လားရှိုး မူစယ် နမ့်ခမ်း တောင်ကြီး ပင်လုံ မိုးနဲ တာချီလိတ် ဒေသခံများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရသည်။ ဂျွန်လ ၂၃ ရက်ညနေပိုင်း တာချီလိတ်မှ ထွက်ကာ မယ်ဆိုင်မှတဆင့် ဌာနချုပ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
at 6/25/2013 08:02:00 AM
at 6/25/2013 07:57:00 AM
panglung matut 87
Hannah Beech ဆိုတာ ဘယ်လောက် ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးလဲဆိုတာ ဖတ်လိုက်ကြပါဦး
at 6/25/2013 07:51:00 AM
shared By FB- အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ပုံပျက် ခင်စိန်'s photo.
Hannah Beech ဆိုတာ ဘယ်လောက် ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးလဲဆိုတာ မသိရင် ဖတ်လိုက်ကြပါဦး Time မဂ္ဂဇင်းကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး သွေးထိုး အစိုးရ၀ါဒဖြန့်တွေရေ ... ဒီလို အမျိုးသမီးက မသိတဲ့အကြောင်းအရာကို ရမ်းသမ်းရေးမဲ့ အစားမဟုတ်ဘူး Eleven , Voice , First Weekly တို့လောက်ကတော့ သူက သနားသေးတယ် ငါ့ဆီမှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် အိမ်သာလာဆေးပြီး ပညာသင်လိုက်ဦးလို့ ပြောလိုက်လိမ့်မယ် ။
နာဂစ်သူရဲကောင်း ဟန်နာဘိခ်ျ ဦးဝီရသူကြောင့် အဆဲခံရခြင်း
ဇွန်လ ၂၄၊ ၂၀၁၃။
ယခု အသံများဆူပွက် သွားစေသော ဦးဝီရသူပုံပါ ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ပါ Face of Buddhist Terror ဆောင်းပါး ကိုရေးသားသူမှာ ဟန်နာဘိခ်ျ ( Hannah Beech) ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘ့ာသိက္ခာရှိ မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ဖြစ်သည့် တိုင်းမ်း မဂ္ဂဇင်းမှ သတင်းစာဆရာမ ဖြစ်သူ ဟန်နာဘိခ်ျ မှာ အမေရိကန် လူမျိူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ၏ အာရှရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ လည်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ၏ အရှေ့တောင်အာရှ ဗျူရို အကြီးအကဲ အဖြစ်လည်း မကြာခဏ ဖော်ပြခြင်းခံရသော ဟန်နာ ဘိခ်ျ မှာ မနှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် ခဲ့သော၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် ၂၀၁၂ တွင် Panel Speaker တစ်ဦး အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွက် ထင်ရှားသည်။
U.S. NEWS & WORLD REPORT တွင်အလုပ်သင် သတင်းထောက်အဖြစ် သတင်းစာလောက သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည့် ဟန်နာမှာ အာရှရှိ သတင်းအဖွဲ့အစည်ုး အတော်များများ တွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသည်။
ဟန်နာဘိခ်ျ မှာ အာရှတိုက် သတင်းစာထုတ်ဝေသူများအသင်း ၏ အကောင်းဆုံး အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဆုဖြစ်သည့် (SOPA ) ဆု ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့သည်။ ထိုဆုကို ရှရှိရာတွင် အကောင်းဆုံးသတင်း ဂုဏ်ထူးဆောင် အထူးဆု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရရှိခဲ့သော သတင်းဆောင်းပါးမှာ "Cyclone Nargis in Burma" ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က မြန်မာ့သမိုင်းစဉ် တွင် အကြီးမားဆုံးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယကြီး ဖြစ်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ သရုပ်ကို ကမ္ဘာ့ စာဖတ်ပရိသတ် ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်သာအောင် ဖော်ကျူး ပြနိုင်ခဲ့သောကြောင့် အဆိုပါ ဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသင့် အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း သိန်း နှင့်ချီ သေကျေပျက်စီးခဲ့ပြီး ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှု မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားခဲ့ပါသော်လည်း ထိုစဉ်က အုပ်ချူပ်သူအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချူပ် မှူးကြီး သန်းရွှေအစိုးရ (လက်ရှိသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်မှာ ထိုစဉ်က ၀န်ကြီးချူပ်ဖြစ်သည်။) မှာ ဘာမှမဖြစ်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါသည်ဟု တွင်တွင် လိမ်လည် နေခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာမှ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် မုန်တိုင်းလွန်ကာလ ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီများကို တစ်လကျော်ကြာ လက်မခံနိုင်ဟု ငြင်းဆန်နေခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းကြောင့်သေဆုံး သွားခဲ့ရသူများမှာ အမှန်တကယ်တွင် နှစ်သိန်းခွဲ နှင့် သုံးသိန်းအကြား ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းခဲ့ပါသော်လည်း ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအစိုးရ က တစ်သိန်း လေးသောင်း ၀န်းကျင်ခန့် နှင့် စာရင်းပိတ်လိုက် ပြီး ၄င်း တို့၏ တွေဝေတာဝန်မဲ့မှုများကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသော အထိအရှ စာရင်းကို မှေးမှိန်အောင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံတကာကိုလည်း ၀င်အကူအညီမခံ၊ မ်ိမိတို့တွင်လည်း ကူညီနိုင်သည့် စွမ်းအားမရှိဘဲ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဖြစ်နေချိန်တွင် ၊ ပြည်တွင်း သတင်းစာ၊ဂျာနယ်များ တွင်လည်း နာဂစ် နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်း များ အားတင်းတင်းကြပ်ကြပ် စိစစ် ပြီး အထူးသဖြင့် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများစသည့် အထောက်အထားများအား ရသလောက်ဖျောက်ဖျက်ပစ်နေချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းတွင် အမှန်တကယ် ဘာဖြစ်နေသည် ကို ပြင်ပကမ္ဘာ သို့မပေါက်ကြားစေရန် အမြင့်ဆုံးအဆင့် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အချိန်အခါလည်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော အခြေအနေသမယ အတွင်း ဟန်နာဘိခ်ျ ၏ Cyclone Nargis in Burma ဆောင်းပါး ပါလာခဲ့ပြီး အထောက်အထား အတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်း အမှန်တကယ် ဘာဖြစ်နေသည်ကို ပြင်ပကမ္ဘာ သိခွင့်ရသွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချူပ် ဘန်ကီမွန်း က မြန်မာပြည်တွင်း လာရောက် ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုသည်အဖြစ် ဦးတည် သွားစေပြီး ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရ မှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီများအား ၀င်လာခွင့် ပြုလိုက်သည်။
အထက်ပါ အကြောင်းချက်များအား ထောက်ချင့်ကြည့်လျှင် ဟန်နာဘိခ်ျ ၏ ကလောင်သွားမှာ မြန်မာပြည်သူများအတွက် မည်သို့ အကျိူးပြု ခဲ့ဘူးကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ထိုစဉ်က ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၊ ပြည်တွင်း မြန်မာပညာတတ် များ အကြားတွင် ဟန်နာ ၏ အဆိုပါ ဆောင်းပါးမှာ များစွာ အားပေးသြဘာပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဟန်နာဘိခ်ျ မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကလည်း အဆိုပါ အာရှတိုက် သတင်းစာထုတ်ဝေသူများအသင်း ၏ အကောင်းဆုံး အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဆုဖြစ်သည့် (SOPA ) ဆု ကို အကောင်းဆုံး အတွေးအမြင် ဆောင်းပါးဆု ရရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ တွင် လေးစားခြင်းခံရသည့် သတင်းစာဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။
credit:::---- M M M / ဟံသာဝတီ
Photo - The Harvard Club of Hong Kong
YA HKYAK HKYAK MYEN ASUYA SHAW TAW NGA AI MAWLA-NYET
at 6/24/2013 08:20:00 PM
Gawdin (bawlung) poi hta poi sa yu ai shawa masha langai mi hku nna dai ginsup taw nga ai wuhpung lahkawngashamu shamawt ai ladat hpe asan sha mu lu ai zawn,.. ya hkyak hkyak myen asuya shaw taw nga ai mungmasa maw la-nyet hpe mung anhte mungmasha ni asan sha mu mada lu nga ai. Kaja wa nga yang shanhte myen asuya ni san seng ai myit rawng ai rai yang aten kadun ninggam hte ninggam hparan la mai nga ai. Lachyum gaw mungmasa manghkangamajaw matsan chyaren mat wa ai manghkang re hpe chye nga ninglen mungmasa hpe shawng nhparan ai sha, sut masa hte shawng hparan mayu ai ladat gaw, aten garawt na matu MAW LA-NYET shaw taw nga ai ni rai nga ma ai. Hpa majaw aten garawt mayu ai i nga yang?
(1) Jet ai Munghpawm Federal n kam jaw ai majaw aten garawt taw nga ai mawla-nyet.
(2) Myen mungdanamungmasa manghkang hpe sut masa manghkang de gale kau na matu shaw taw nga ai mawla-nyet.
(3) Ya hkyak hkyak myen mungdan ting gap hkat jahkring tawn lu sai ngu ai maisau pa hpe mungkanamanemadun lu na matu shaw taw nga ai maw la-nyet.
(1) JET AI MUNGHPAWM FEDERAL NKAM JAW AI MAJAW ATEN GARAWT TAW NGA AI MAW LA-NYET…
Namsi hpun langai mi hpe,.. ndai namsi hpun gaw kaja ai kun? (or) nkaja ai kun? chye na matu dai namsi hpun hpe sa gahtam jahpye nna n-yu ra ai, dai namsi hpun kawn si pru wa ai namsi hpe yu nna chye ginghka la nga ai. Dai hte maren daini na myen asuya mung Jet Ai Munghpawm Federal jaw mayu ai kun? (or) njaw mayu ai kun? ngu ai hpe mung asan sha chye ginghka la lu nga sai. 2008 ning Constitution hpe gaw annau ni tsepkawp nmai hkap la ai. Ndai Constitutionakata kaw gaw Jet ai Munghpawm Federal tsepkawp nmai byin ai. Jet ai Munghpawm Federal hte jawm nga na matu gaw Constitution hpe Panglong Agreement hta npawt hpang nna jawm ka ra ai. 2008 ning Constitution hpe gram na matu gaw grau yak ai bungli re, gram nmai hkra dai constitution kaw nan ka sha-ngang tawn kau sai. Constitution hpe Panglong Agreement hta npawt hpang nna ningnan bai jawm ka tawn lu jang she Kachin Ethnic Self Determination of Kachin state (Jet ai Munghpawm Federal) mai byin ai. Panglong Agreement hta npawt hpang ai Constitution hpe nkam jawm ka nga dingsa gaw,.. machyi taw nga ai ana hpe nkam mai tsai shangun mayu ai majaw hpa nseng ai tsi mawan hte tsi lajang taw nga masu ai lachyum rai nga ai. Lachyum gaw.. aten garawt taw nga mayu ai MAW LA-NYET rai nga malu ai.
(2) MYEN MUNGDAN A MUNGMASA MANGHKANG HPE SUTMASA MANGHKANG DE GALE KAU NA MATU SHAW TAW AI MAW LA-NYET.
Gumsan Magam Thein Sein hte Aung San Suu Kyi gade daram akyang laban ai ngu ai gaw…Myen mungdan mungmasa manghkangamajaw byin taw nga ai dinghku majan hpe sut masaamajaw byin ai majan maga de gale mat wa hkra maw la-nyet shaw bang wa ai lam gaw shagri pyi lawm hkra madawn na daram matsat shabat rai nga ai. Shan lahkawng mungkanamanetsun shaga ai gaw Asuya hte mungmasha MATSAN HPANG HKRAT mat wa ai dai langai sha mungkanamanetsun ai, Hpa majaw MATSAN HPANG HKRAT mat wa aianpawt nhpang hpe mungkanamanentsun ai, Mungmasa manghkang dinghku majan nau galu mat wa ai majaw MATSAN HPANG HKRAT mat wa ai re lam hpe mungkanamanetsepkawp ntsun ma ai. Htawng masha dat ya ai hte Media loili hpaw ya ai gaw mungkan shinggrup nna mawhpyi hpyi hkawm na matu sha rai nga malu ai. Anhte mungmasha ni madi shadaw nna Aung San Suu Kyi lu ai mying kaja hte Kumhpa ni gaw bai shabai la nmai mat sai. Ndai ten hta shan lahkawngayaw shada ai ladat gaw mungmasa manghkang hpe sut masa manghkang maga de gale kau mayu ai maw la-nyet rai nga ai. Ndai zawn mungmasa manghkangamajaw Annau niamyit masin kraw lawang kata kaw machyi taw nga ai ana hpe sut masa ja gumhpraw hte tsi lajang yang mai tsai lu ai baw rai kun? A’tsawm myit yu ga.
(3) YA HKYAK HKYAK MYEN MUNGDAN TING GAP HKAT JAHKRING TAWN LU SAI NGU AI MAISAU PA HPE MUNGKAN A MAN E MADUN DAN LU NA MATU SHAW TAW NGA AI MAW LA-NYET.
Lai wa sai Myitkyina Zuphpawng kaw Aung Minn tsun ai mungdan ting (alung tsung apit ahkat yat tse ye) gap hkat jahkring hpe du na ra ai July shata hta galaw na lam tsun shalawm ai. Ndai ga’ngau hpe ntsa lam hku sha yu yang grai jaw ai, grai teng ai, grai kaja ai hku mu mai nga ai. Raitim shanhte myen nialagu yaw shada tawn ai masing hpe kata lam akri akrai yu ai shaloi gaw, Laknak lang rawt malan ai Wuhpung Wuhpawng niantsaeshaw taw nga ai MAW LA-Nyet kaba rai nga malu ai. Ndai ga’ngauantsaeanhte Rawt Malan hpung ni grai sadi ra na re. Chye na hkamla shut na grai tsang ra nga ai. Chye na hkamla nshut na matu gaw myen asuyaayaw shada tawn ai masing kaba hpe shawng tau hkrau nna chye tawn ra na re. Myen asuyaalagu yaw shada tawn ai masing kaba gaw, Myen mungdan kata kaw byin taw nga ai Mungmasa manghkang, Hpyen masa gasat gala manghkang, Shinggyim ahkaw ahkang manghkang, ma hkra hpe Sut masa hte shawng hparan mayu nna, SUT MASA HTE HPARAN NLU JANG HPYEN N-GUN KABA HTE HPARAN SHAKRE KAU NA MASING re. Sut masa hte shawng hparan lu na matu gaw aten galu masing rai ra nga malu ai. Aten galu masing re ai majaw 2015 ningaRa’lata poi hta Thein Sein asuya matut nna ahkaw ahkang bai naw matut lu ra ai lam gaw ahkyak dik htum rai nga malu ai. 2015 ningaRa’lata poi hta matut dang na matu mung, Mungdan ting gap hkat jahkring tawn lu sai ngu ai MAISAU PA gaw mungdan kata hte mungkanamaneahkyak dik htum rai nga malu ai. Lachyum gaw, Mungkan kawn sut masa chyinghka hpaw ya sai nga tim, mungdan ting gap hkat jahkring sai lam nlu yang kadai mung sa na nre. Ndai kaw anhte langai mi chye na ra ai gaw, Mungdan langai mi sut masa sharawt la mayu yang Lung Seng pawk ai zawn rai a-gajawng sha sharawt la mai ai nre.
Dai majaw daini Annau ni hpe woi’awn taw nga ai Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/ KIA hte Rawt Malan Wuhpung Wuhpawng ni yawng hpe tsun shadum hpa’ji jaw mayu ai gaw, Ya hkyak hkyak myen asuya ni hku nna Anhte Rawt Malan Wuhpung Wuhpawng ni kaw na ra sharawng taw nga ai gaw mungdan ting gap hkat jahkring ai lam hta myit hkrum ya na ahkyak dik re ai zawn, Anhte Rawt Malan Wuhpung Wuhpawng ni mung myen asuya kaw na ra sharawng taw nga ai gaw Panglong Agreement hte gawgap ai Federal hpe myit hkrum ya na ngu ai GA’SADI shawng lu hkra la ra na re. Ndeantsaeshanhte myen ni myit hkrum ya lu jang she anhte mung myit hkrum ya mai na re. Dai pyi gaw myen asuya hte anhte Bawsang ni chyu sha nmai ai. UN, EU, US, UK, hte China ni lapran sakse hku shang dung lawm ra na re ngu mu mada ai. Myen asuya ni mi rai rai, Rawt Malan Bawsang ni mi rai rai, Sadi run ai ni hpe lapran sakse ni hku nna gara madang hku ahkyak la mat wa na lam mung ka shalawm ra na re.
Ndai kaw myen asuya ni galoi mung akyang laban ban re mabyin langai mi hpe mung ka shalawm ra na re. Yawng hte gap hkat jahkring tawn tim, myen asuya ni sadi run ai shaloi gaw yawng hpe kalangta n-gap ai, langai hpang langai shamyit mayu ai. Hpa majaw nga yang myen amyu ngu ai ni gaw galoi mung sadi ndung ai amyu re ai hta n-ga, MAW LA-NYET chyu shaw ai ni re majaw bai byin wa na majanamatu mung ka nan ka shalawm tawn ra na re.
By JPKS blog
at 6/24/2013 07:24:00 PM
Hkungga Tsaw ra ai,
shara shagu chyambra nga ai, chyurum ai WP myu sha ni e,ndai ten hta annau ni yawngamatu,
sadi maja ra dik ai aten du nga sai,sadi maja ngu ai lai ngu n'nga ai zawn,malap mali nga kau yang tinang prat
langai sha n;ga,myu sha yawng sum machyi hkra machyi dik wa na re ai hte,tsadan sawa gaw anhte gawng kya ai,
malap mali rai,myitmu samsi temsi rai,yup nga ai ten hpe yu nna du shang wa chyalu re.
Yup wa rawt wa,sha ai ten, lu ai ten,shang wa pru wa,hpawng de ai ten hkawm sa ai ten,
shani shana n'sin n;htoi,pru shang masha yawng hpe jen yu chyoi yu,maram yu let ten hpring sadi maja nga ga ngu
sadi jaw lajin dat mayu nngai,myu kaba kata mi rai rai,maiganemi du du,mare buga kaw mi rai rai,bungli sa ai wa ai,
jawng sa jawng wa,zahpawng hpawng ai ten hte,grau nna gaw,myu sha yawngamatu lawt lam tam nga ai tinang shing wang
kata grau sadi ra nga ga ai.myit malai ai gaw hpangeshe lu ai,myit malai lu ten gaw hpang hkrat sai,ten grai nlai yang
tau nau nna,galoi mung sadi maja sadi dung nga ga.masha law law hpawng de ai shara shimlam hpe madung dat ahkyak la ga.
masing kaba [4]
1-Myu shamat shamyit masing.
2-Makam masham htung hking laili laika ga shamat shamyit masing.
3-Sutgan malu masha dawmdi shamyit shamat masing.
4-Matut mahkai hkrun lam shiga dandi masing.
Ndai masing ni kata hta sat nat mya dawndi masing kaba jahkrat nna annau niagawng kya ai,
mabyin ningmu hpe yu nna tai hpyen sawa gaw ten hpring kadai hpe mayu sha na, kara shara, kara ten,
mayun hpyana jahten na myit tawn chyalu re hte ya mung galaw nga ai matut nna mung ladat shaw jahten na re..
hpyen waagawng kya ai hpe yu nna annau ni mung matut dating gasat ga.
masin machyi ai,myit n'gut dik ai.
Simsa lam grai nhkrum bawngban yang,shada kamsham ai mahkyen shawng galaw madun ra ai,
at 6/24/2013 07:23:00 PM
kam sham lam n;nga ai simsa lam gaw ntsa lam,n'grin ai simsa lam namnak n'nga ai majaw bai hten na sha re.
simsa lam gaw shada asan kam hkat na ahkyak ai.tsun ai hte maren kam gin ai madi madun gin ai shawng mu lu yang lit la lu yang she,htani htana myu sha yawngaakyu rawng ai simsa lam byin na re.ntsa lam sha nrai teng galai shai ra ai.
teng man simsa lam byin tai pru wa yang gaw labau shang ai simsa lam rai na re.
1- Democracy tara masing masa hte hkrang shapraw Democracy asuya langai hku ndau shana
tawn sai hpyi galai gumshem asuya gaw Tinangajinghku rai nga ai,myit rum manang rai nga ai democracy ahkaw ahkang hpyi ai,democracy tara rap ra ai de sa wa na matu mung shawaansen kaba shapraw nga ai ni hpe hpa
majaw bawng masha hku rim sharawng tawn ai kun?democract ahkaw hkang hpyi nna sharen da
hkrum tawn ai myit rum manang mungmasa la ni hpe hpa majaw ndat gwi ai kun?hpa majaw mung masa hte rim sharawng taw ai bawng masha n'nga ai nga tsun masu ai kun?,hpa majaw mung shawa hte maigan ni teng man ai hpe nhakm gwi ai,masu htawng dan nga ai kun?
2-Mung shawaara lata poi shang nna,Democracy asuya nga marawn tsun taw nga ai,
hpyi galai asuya gaw hpa majaw hpyen dapanpu kataesumla zawn shamu shamawt ai asuya
tai nga ai kun?teng man ai mung shawa asuya langai teng hkrang gran ai rai yang,hpyen dap gaw
rapdaw npu kataenga ra ai,rapdaw hta hpa majaw 100 lam shadang 27 gaw hpyen dap de na
ading tawk radaw Slg hku up hkang hpawng hta shang lawm ra ai kun?
3-Democract mung up tara hkrang hku teng sa ai rai yang, bawsang ni hte
shaning galu dinghku majan byin nga ai hpe hpa majaw teng man ai hte simsa lam nmai la ai kun?
hpa majaw mara kata bawsang myu sha ni hpe sat shamyit ai masing hte majan baw ai kun?mung shawa hpe makawp maga ra ai hpyen dap gaw hpa majan mara n'nga ai ni hpe dasang zingri shamyit nga ai kun?hpa majaw mung kan na asuya langai hku nmasat ai kun?
4-ASEAN rapdaw de shang ai shaning 17 she du wa sai hpyen asuya gaw shang ai shani kaw na
dai ni du hkra hpa majaw mang hkang hte makau grup yin Asean mungdan ni hpe du hka jaw nga ai kun?mang hkang hte hkrang madun nga ai kun?madi shadaw ai lam n'galaw ya lu ai kun?
Tinang mung shawa ni ndai ram matsan grit nyem dik ai sutgan kata masha tai nga ai hpe hpa
majaw nmu masu ai zawn masha sat ai machyu pala ni hta mungdanaja gumhpraw ni hpe shama nga ai kun?tinang mung shawa hpe hpa majaw lit nla gwi ai kun?
Lahta tsang hpyen du kaba ni mayun kumhpa sha ai gumhpraw mang hkang ni langai hpang langai,dan pru ai,kade magup tim kata lam gumhpraw mang hkang gaw lani hte lani langai hpang langai dawng pru wa nga ai kade magup tim magup nlu rai nga sai,
law dik ai shanhte kata na mang hkang kaba ni,hpyen dap hte mung up rapdaw nialapran n'gun gang hkat ai arawng aya ahkaw ahkang kashun jum ai,rapdaw ni tsun galaw ai myu mi hpyen dap ni hkrang shapraw galaw ai gaw hka hte sau zawn,katsi kahtet lam2mahkret2masa2hku sa nga ai hte bung nga ai,hpyi galai asuya gaw galoi du grin na,pung hkum ashun nga ai,masa ndai ni majaw,shan hte pahkam gaw hpyen dap kaw nna,asuya ahkaw ahkang hpe kalang hpe jumtek na masa de yawng nga ai.
shanhte myit tawn ai tsun tawn ai lam nbyin wa na tai sai majaw,hpyen dap kaw na jum tek na de shanawng nga ai,anhte bawsang ni hpe dasang gasat ai gaw Democracy hkrang hte sa ai
tsun garu tawn ai gaw lamu hte ga wa shakap shai rai nga ai.
hpyen gumshem gaw prat masa,mabyin masa,tara masa hku teng hkrat nan hkrat sum na ten du sai.nsam grai kaba tsawm hkra myu kaba mahku hte kade marawn tim kraw kataegaw hpung kraw rai nga sai,la kaba kaya yang si ai nga zawn byin hkyen sai.
Annau ni hpe n'gun kaba hte kade htu lung wa tim nta bai nhtang wa na lam shamat ai zawn
sa lam sha mu nna wa lam n'nga ai yubak zinlawng hku de du nga sai.mayam hpyen n'chyang hpyen re majaw,tinang galaw ai mahkam sumri gaw tinang nan hkam sat la ai hte bung nga ai.
Annau ni padang dip la na nyi wa sai,shakre la na sha rai sai.
labau shang awm dawm simsa lam gaw kadai hpe mung hpyi nra annau ni nan ndau shana na ten du sai,lu ai atsam yawng hte naw dating gasat ga.
at 6/24/2013 07:22:00 PM
Udi matu tam shamat ai zawn gin sap tsip shanut hpe hpran aran magang di abrut mat ai zawn byin nga ai myen mungashaning galu matut manoi byin hkrum hkra nga ai hpe dai ni du hpa majaw n’mai shazim lu nga ai kun?mabyin nga ai zawn mahkyen mung nga ai . byin chye ai masa re gaw galaw ai wa nga nan nga ai hpe yawng chye nga ai tim,kadai galaw ai ngu ai hpe gaw yawng myit shang sha ai the sagawn chyalu re.
Awng San Baw jaw jang myen mung hta n’mai byin ai hpa mung n’nga ai nga Miwa ni n’gup kaw noi garu mying kaba lai wa ai, prat langai mi ban langai n’ga,ya dai ni du dai masa hta tsap nga ga ai .Mung chying masat, tara je yang ai rung,aming duru ahkang aya,lamu ga,sut hpaga lam,arung arai yawng hpe Awng san baw the kalai kau magang sai. dik dik si ari hkrum tim Awng san baw jaw jang mai lawt ai.dai ni myen mung masha ni gaw mare kabaashingnawm de du mat ma sai hta n’ga,madu ni gaw mare shing nawm,manam ni gaw mare ka-angening-ngai shajang nga sai. Miwa ni gaw Sam mung jinghpaw mung,myen mungalamu ga the dum n’ta bungli galaw dabang yawng,n’hprang rai,ja maw,lung seng maw,tsi hkung Tsinan,dusat yam nga yawng hpe Awng sang baw madun n’na kalai madu la kau sai.dik dik mang hkang byin wa yang pyi miwa shut tim anhte mare madu n’ta madu ni hpang de tsap n’na kadai n’gwi shaga je yang ai daram Miwaaahkang aya gaup dip nga sai.lamu ga mung tam shamat kau rai byin hkrum hkra nga ai myen mung masha ni gaw n’lu tim lu tim maigan pru she shaja magang rai nga ai jaw miwa gaw grau kabu magang byin nga ai n’lu n’lawm re sha gaw kade n’kam n’ja tim miwa lata de dut kau da ra sai masa kaba hta du shajang nga saga ai.mungchying masha ni gaw Miwaakaup sha nga ai hpe n’kam hkam dik tim laknak hpai ai ni hpe hkrit ai jaw sharang nga ai.
N’dai zawn re matsan n’hkun kata kaw kaning rai sak hkrung hkra nga na rai ta?Dai ni Thein sein gaw singgu krin kaya n’su,labu palawng n’kap ai mungkan shing grup n’na [ Maw Hpyi ] hpyi lu hpyi shahkawm nga ai re.taw labu palawng mung n’kap ai shinggu krin hpa rai hpyi sha hkawm nga n’ta?Gum san sari pyi ahkayk n’la sai kun? Ngu san dat yang ,byin ai hpe byin ai hku madun ai re nga bai htan na sha re.n’dai zawn re matsan n’hkun kaw manghkang kade byin pru tim ahkyak la je yang gwi na kun?dai myen mung htumpa kaw na n’dung hkrun Miwa maza kanuasha zingri hkrum nga ai hta n’ga,Miwaagumhpraw hka law lawan’sa kaw sak hkrung tsap nga ai myen Thein sein asuya kaning rai n’na,Miwa the galaw tawn ai mang hkang law law hpe mai shazim gwi na ta?
Myen mung shanglawt grai n’lu shi ai kaw n’na,rudi tam tinang amyuamatu akyu ara hpe yu n’na bungli masing jahkrat galaw chye ai Kala gaw maji ai[ maji wahku] hta mying gumhkawng ai zawn mai byin yang hka n’tsin hpe pyi shen n’na lu na daram sawn ai kala gaw Miwa zawn atum apa ashan azin galau sha ai hku n’re sha, myen mungalaswi lasa,masin salum sai lam hpe gangwi madu n’chye hkra ahkyak ai ni hpe mayun hkumhpa jaw,salum jinghpa ushoi dun rai?myenamying kaba ai ahkyak madung byin nga ai masha kaba du kaba ni hpe moi moi kaw na ushoi dun gang ashun tawn sai re dai kaw Aung san su kyi [NLD} mung lawm mat sai jaw dai ni na ten hta myen Thein sein asuya masu gaw lahkawng maga de hkrit tsang ra dik ai mahkam hta lu nga ai zawn grup grup de na bawsang the mayak law law gaw madi shakyin nga ai,ahkyak dik ai aming jaw je yang dat ai the rau hka kaba hpyi shakyin ai n’gatut hkra masa hpe lede achyaw wawde achyaw dat rai,n’shan2a lapran grup grup madi tawn sai ahparan yak nga ai .ndai hta2brang byin nga ai Myen myu sha niamakam [Bukda ]the mung shawa gaw shangun sha hkrum nga ai zawn byin nga ai.N’dai mabyin hpe yu maram n’na annau nialawt lam tam mu wa lu na re,grau ahkyak ai daw ni hpe matut ka shalen ran kau ranare jaw matut n’na daw4du naw ka hparan na.
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများမှာ အမျိုးသားရေး ၀ါဒအား အခြေခံ၍ အာဏာရှင် စနစ်သစ် ဖော်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း EDUCATIONAL INITIATIVES က ဝေဖန်
at 6/24/2013 11:32:00 AM
ဒီမိုကရေစီရေးဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအား လေ့လာနေသည့် The Educational Initiatives အဖွဲ့မှ Mr. Igor Blazevic အား တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဗဘာသာဝင်များ အကြား လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများမှာ အာဏာရှင် စနစ်သစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း The Educational Initiatives မှ Mr. Igor Blazevic က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်အား ဇွန် ၂၂ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင် ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Transition to Democracy ; Challenges and Threats ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဏာရှင် နိုင်ငံများမှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသည့် နိုင်ငံများ၏ ဒီမိုကရေစီရေးဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအား လေ့လာနေသည့် The Educational Initiatives အဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာများမှာ ယခင်စစ်အာဏာရှင် အစိုးရလက်ထက်ကဲ့သို့ မိုက်မဲသည့် အုပ်ချုပ်မှုမျိုးဖြင့် အုပ်ချုပ်ရန်ထက် ဒီမိုကရေစီဟု ဟန်ပြပြောနိုင်သည့် အာဏာရှင် စနစ်သစ်သို့ သွားရောက်ရန် ကြံရွယ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Mr. Igor Blazevic က ဆိုသည်။
လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲစိတ်ကို အခြေခံပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်စေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေး ၀ါဒကို အသုံးပြုပြီး အကြောက်တရားတွေ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်သစ်ကို ဖော်ဆောင်ကြတယ်။ လူနည်းစုနဲ့ လူများစုကြားမှာ အမုန်းတရားတွေ ထည့်ပေးပြီး အသိဥာဏ် အမှောင်ချဖို့ လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ရပ်စေပြီး အရေခြုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် . . . . .
"လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲစိတ်ကို အခြေခံပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်စေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေး ၀ါဒကို အသုံးပြုပြီး အကြောက်တရားတွေ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်သစ်ကို ဖော်ဆောင်ကြတယ်။ လူနည်းစုနဲ့ လူများစုကြားမှာ အမုန်းတရားတွေ ထည့်ပေးပြီး အသိဥာဏ် အမှောင်ချဖို့ လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ရပ်စေပြီး အရေခြုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်" ဟု Mr. Igor Blazevic က ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်စဉ်များအား လုပ်ဆောင်၍ ဆားဗီးယားနိုင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသားရေး ၀ါဒအား အသုံးပြု၍ အတိုက်အခံများအား အနိုင်ယူကာ သမ္မတ မီလိုဆီဗစ် အနေဖြင့် ပုံမှန်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အစဉ်အဆက် အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ယူကရိန်း နိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ အမျိုးသားရေး ၀ါဒအား အခြေခံသည့် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ အတိုက်အခံ ပါတီများအနေဖြင့် ထိုအာဏာရှင် စနစ်သစ်အား စုစည်းတွန်းလှန်နိုင်ရန် အချိန်ကာလ များစွာယူခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ အမျိုးသားရေးဝါဒ အသုံးပြု၍ အာဏာရှင် စနစ်သစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများအပြင် အစိုးရအား ဟန်ပြဝေဖန်ပြီး ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံရေး ရေချိန်အပေါ် လမ်းလွှဲနိုင်သည့် လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာကြီးများနှင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အနည်းငယ် ပေးအပ်ကာ အတိုက်အခံများကိုလည်း မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ပေးအပ်သော်လည်း လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာများကဲ့သို့ လူစိတ်ဝင်စားမှု မရှိစေရန် ထိန်းချုပ်မှုများ ပြုလုပ်၍ အာဏာရှင် စနစ်ဟောင်းကဲ့သို့ မဟုတ်သော အာဏာရှင် စနစ်သစ်များအား အကောင်အထည် ဖော်လေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
"အာဏာရှင် စနစ်ဟောင်းမှာဆိုရင် ၀ါဒဖြန့်ဖို့ သတင်းစာကို သုံးတယ်။ ပြည်သူက မယုံဘူး။ စနစ်သစ်မှာတော့ အတိုက်အခံကို အားနည်းအောင်လုပ်ပြီး လူပြိန်းကြိုက် မီဒီယာတွေ မွေးတယ်။ စနစ်ဟောင်းမှာ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ထားပြီး စနစ်သစ်မှာ အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားပေမယ့် လျှို့ဝှက်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းပြီး အင်တာနက်မှာ သတင်းအချက်အလက်တွေ စုစည်းခြင်း၊ ၀ါဒဖြန့်ခြင်း စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတယ်" ဟု Mr. Igor Blazevic က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သူခိုးဓမြ အစိုးရ လုပ်ထားသမျှ တပိုင်းတစ ဖေါ်ကောင်လုပ်လိုက်ပြီ
at 6/24/2013 11:30:00 AM
ကြက်ဆူပင် စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းအား ခရိုနီကြီးတေဇ နှင့် ယခု အများခေါ်နေကြသော ဗကပ အောင်သောင်းတို့ က စလိုက်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အမေရိကန် ဒီမိုကရရေစီထွန်းကားရေးဟုဆိုသော သမ္မတ ဘုရှ်၏ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် စတင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်စပြီး ၀င်လာမစဲတသဲသဲဖြစ်နေသော ရတနာ နှင့် ရဲတခွန် ဂစ်ပိုက်လိုင်းများမှ အကြီးကျယ်ရရှိသော ဘီလီများအား စင်္ကာပူတွင်ရှိသော DBS Group Holdings and Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC အလုံးအရင်းဖြင့် အပ်နှံထားခဲ့ကြရာမှ ငွေအင်အား အတော်ပင်ကြီးမားလာပြီး စိတ်မချမှုများဖြစ်လာသောအခါ လူယုံတော် တေဇ၏ စင်္ကာပူအခြေစိုက် စီးပွားရေး အုပ်စုမှ တောင်အမေရိက အာဂျင်တီးနားတွင် အခြေစိုက်သော နိုင်ငံတကာ အပမ်းဖြေ အပျော်စီးသဘောင်္ကုမ္မဏီ ၂ခုအားသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး အစုရှယ်ယာ များဝယ်ယူပြီး ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ကိုင်ကြရန်သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး တောင်အမေရိက တိုက်နိုင်ငံ တချို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး ကြက်ဆူပင် ဇာတ်လမ်းပါလာခဲ့ကြသည်။ "Total and Chevron's Yadana gas project has generated 4.83 billion dollars for the Burmese regime," one of the reports said, adding that the figures for the period 2000-2008 were the first ever detailed account of the revenues. ဆိုပြီး အေအက်ခ်ပီကရေးပါတယ်။
အပျော်စီး သဘောင်္လုပ်ငန်းက သိပ်စိတ်မချရလို့ဆိုပြီး တောင်အမေရိကားက ကြက်ဆူပင်ကနေ ဒီဇယ်တွေ လောင်စာတွေထုတ်ဖို့ လေ့လာလိုက်ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ် သန်းရွှေကို သံတော်ဦးတင်ကြပါသသည်။ ဦးအောင်သောင်းက သက်တော်ရှည် အမတ်ကြီးလိုလုပ်ပြီး ယာတြာနဲ့ပါထောက်ပြလို့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ ကြက်ဆူစီမံကိန်းအား လှည်နေလှေအောက် မြင်စောင်းမကျန် စိုက်ဖို့ စီမံကိန်းချလိုက်ကြတာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ လောက်ကို တရုတ်က နေ ချေးပြီး လုပ်ကြပါသတဲ့ အဲဒါကို The Myanmar Time ကခုလိုရေးထားပါတယ်။
In late 2005, thegovernment announceda massivenew initiative to cultivate and harvest oil
from the Jatropha curcas plant [Jetsu]. The government stated their goal was to have
bio-diesel fuel meet all of the country’s energy needs. The plant needs four years to reach maturity, and by then the government expected to be using and exporting Jatropha
oil in vast quantities.
နောက်ဆုံးတော့ တတိုင်းပြည်လုံး သွက်သွက်ခါ ခွက်ခွက်လန်ရှုံးသွားတာကိုလဲဘယ်သူကိုမှ မပြောတော့ပဲ ကိုယ့်အမှီးကိုယ်ဝှက်ပြီး ထွက်သွားတဲ့ ခွေးကလေးတကောင်နဲ့ တူသတဲ့အကြောင်း အောက်က ဖေါ်ပြချက်မှာမြင်ရပုံက တတိုင်းပြည်လုံး ခလေးလူကြီး မကျန် လုပ်အားနှင့် အချိန် လယ်ယာ ကောက်ပဲသီးနှံ အားလုံးဆုံးရှုံးရပြီး ၀မ်းနည်းပက်လက်ပါပဲ။ မြန်မာ တိုင်းမ်က ပေါ်ပေါ်တင်ပဲ အဲဒီအကြောင်းကို ဖွင့်ချခဲ့ပါတာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Agriculture officials in Rakine State reported losing about 55 percent of their crops, while locals in Karen State reported failure rates as high as 75pc. The Ethnic Community Development Forum’s report credited the plague of crop failure toacombination of poor planning andapoor understanding of the Jatropha plant. While Jatropha is able to grow in poor soil, the plants that grow will be weak and more prone to failure. Additionally, the people tasked with planting the seeds were often not farmers or specialists of any kind. They were normal citizens forced into work by the old government. Teachers, students, children, farmers, nurses, civil servants, and prisoners were forced to plant the tree along roadsides, at schools, hospitals, religious compounds, and on farmland formerly used for producing rice. There is no official date on when the Jatropha project ended, but it appears to have folded soon after the disastrous first year of production. The Military government investedalarge amount of money, force, land, and time into the project and today there is nothing to show for it. The Myanmar Times contacted several people involved with the project, but most declined to comment. A retired director general from the Department of Energy Planning said “[Jatropha] didn’t work. No one wanted to do it patiently and people didn’t haveapassion to make itasuccess. I think that’s why we failed.”
ဒါနဲ့ပဲ တရုတ်က အကြွေး အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ကို လျော်ပေးမယ်ပြောပြီး မြန်မာပြည်အနှံ ဒီဇယ် မသုံးရပဲ သဘာဝ ရေအားလျပ်စစ် ဆည်ကြီးတွေ ဆောက်ဖို့ မြူခေါ်ပြောဆိုရာနောက်ကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ တစုံလုံး ကောက်ကောက်ပါ လိုက်သွားကြပါတော့တယ်။ အချို စီမံကိန်းတွေကတော့ အရင်ထဲကကို ဘယ်သမှမသိအောင် လုပ်ထားတာတွေပါရှိပါတယ်။
အခု အဲဒီဆယ်ကြီးတွေကို အားလုံးမြင်အောင် စာရေးသူ ဖေါ်ကောင် လုပ်ပေးပါရစေ
(၁) Ayeyarwady Maykha/ Malikha Dams ဧရာဝတီ မေခ၊ မလိက ဆည်ကြီး၏ ရှင်းတမ်း အနှစ်ချုပ် (၃.၆ ဘီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The Myanmar Ministry of Electric Power (MEPE) signed
an agreement with China Power Investment Corporation
in May 2007 for the implementation of seven large dams
along the Ayeyarwady, Maykha and Malikha Rivers in
Kachin State. Collectively the dams will have an installed
capacity of 17,259 megawatts (MW). Investment is estimated
to be US$3.6 billion.
However, in September 2011, President Thein Sein announced
a suspension of the Myitsone Dam as 'the will of
the people' due to outstanding environemntal concerns.
Construction of the Dam began in 2009 and projected
revenue generated by the dam was estimated to range
between $558-597millionayear. China has said if the Dam
is cancelled then Myanmar must pay compensation.
(၂) Tamanthi Dam ထမ္မသီ ဆည်ကြီးတည်ဆောက်မှု အနှစ်ချုပ် ရှင်းတမ်း
(၃ (၃.၆ ဘီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The government signed an MOU with India’s National
Hydroelectric Power Corporation (NHPC) in 2004 to
develop the Tamanthi dam on the Chindwin River in
western Sagaing Region. A new agreement was signed in
2008, formingajoint venture to develop Tamanthi as well
as Shwesayay dams.
The dam will be 80 metres high, with an installed capacity
of 1200 MW and an annual production of 6685 Gwh. The
estimated cost of the Tamanthi dam is $3 billion. Eighty
percent of the electricity will go to India, and the rest will
power Monywa mining operations.
Construction at the dam site began in 2007, but is subject
to delays. A detailed project report (master plan) is being
prepared by NHPC.
(၃) Yeywa Dam ရဲရွာ ဆည်တည်ဆောက်မှု အနှစ်ချုပ် ရှင်းတမ်း
(သန်းပေါင်း ၇၀၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The Myanmar government first announced plans for the
Yeywa dam in late 2001. In 2004, MEPE signed an MOU
withaconsortium of Chinese companies to build the dam
on the Myitnge River in Mandalay Division. It is one of
the largest roller-compacted concrete (RCC) dams in the
The dam is 134 metres high with an installed capacity of
790 MW and an annual production of 3550 Gwh. MEPE
signed an agreement withaconsortium created by China
International Trust & Investment Co (CITIC) and Sinohydro
Corporation in 2004. The overall cost is estimated
Construction was completed in 2010.
(၄) Ywathit Dam ရွာသစ်ဆည် တည်ဆောက်မှု အနှစ်ချုပ်ရှင်းတမ်း
(သန်း ၆၀၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
In January 2010, the Chinese state-owned Datang Corporation
signed an MOU with the Myanmar government to
build three dams in Kayah State, includinga600 MW dam
on the mainstream Thanlwin at Ywathit, and two others
on its tributaries, the Pawn and Thabet rivers. Ywathit dam
will have an installed capacity of 600 MW and investment
is estimated to reach $600m.
(၅) Hat gyi Dam ဟတ်ကြီးဆည် တည်ဆောက်မှု ရှင်းတမ်း
Myanmar’s Ministry of Electric Power, EGAT, and China’s Sinohydro
signed an agreement in 2006 for the joint implementation of the Hatgyi
dam on the Thanlwin River in Karen State.
The dam will be 33 metres high, have an installed capacity of 1200 MW
and an annual production of 7335 Gwh. The estimated cost of building
the Hatgyi dam is $1 billion. Most of the electricity from the dam is
intended for sale to Thailand.
Thailand is pushing for it to be the first of the dams built on the Thanlwin
River. Once built, it will pave the way for the building of the other larger
Construction of the Hatgyi dam has begun. Commercial distribution
of power was projected to begin in 2013-2014, however, EGAT has announced
it will be 2019.
(၆) Upper Thanlwin Dam (Kunlong) အထက် သံလွင် ဆည် (ကွန်လုံ) ရှင်းတမ်း
( ၂.၅ ဘီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
In April 2007, two Chinese companies,
Hanergy Holding Group Company and Gold
Water Resources Company Limited, signed
an MOU with the Myanmar government for
the Upper Thanlwin dam in northern Shan
State. Installed capacity will be 2400 MW.
The two sides signed the memorandum of
agreement in Nay Pyi Taw in February 2010.
The project is under implementation.
(ရ) Weigyi Dam ၀ဲကြီး ဆည် တည်ဆောက်မှု ရှင်းတမ်း
(၃ ဘီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The Electricity Generating Authority of
Thailand (EGAT) signed an MOU with
Myanmar on December 9, 2005 for the
development of Weigyi to provide electricity
for Thailand. The dam will be 168 metres
high and an installed capacity of between
4540 and 5600 MW. Construction costs are
estimated at $3 billion. Most of the electricity
from the Weigyi dam is intended for sale
(၈) Tasang Dam တဆောင်ဆည် တည်ဆောက်မှု ရှင်းတမ်း
(၆ ဘီလီယံ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The Tasang dam is the biggest of five proposed dams along
the Thanlwin River in Eastern Myanmar. In July 1996 Thailand
signed an MOU with the Myanmar government.
Tasang dam is set to be 228 metres in height, with an
installed capacity of 7110 MW and an annual production
of 35,446 Gwh. When built it will be the highest dam
in Southeast Asia, taller than China’s Three Gorges dam.
Most of the electricity from the Tasang dam is intended for
sale to Thailand. The initial estimated cost of the Tasang
dam was $6 billion. However the actual costs are likely to
Initially signed with Thailand’s MDX Group, China
Gezhouba Group Co wonacontract for initial dam
construction in early 2007. In mid-2008, Sinohydro, China
Southern Power Grid Co., and China Three Gorges Project
Corporation signed an agreement for the development
of the Thanlyin River Basin in Myanmar, including the
Work on the dam has been stalled, and there has been
little activity at the dam-site.
(၉) Upper and Lower Paunglaung Dams အထက်အောက် ပလောင်ဆည် ရှင်းတမ်း
(သန်း ၇၅၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
In March 2005, MEPE, along with financial and construction
support from Chinese companies, completed the Lower
Paunglaung dam on the Paunglaung River. The dam is 131
metres in height and an installed capacity of 280 MW.
The Upper Paunglaung dam is under construction and is
expected to be completed in 2012. The dam will be 103 metres
high, with installed capacity of 140 MW and an annual
production of 454 Gwh (million kilowatt hours yearly).
Both dams provide power for Myanmar’s capital, Nay Pyi Taw.
(၁၀) Dapeyin Dam ဒီပယင်း ဆည်တည်ဆောက်ထားမှု ရှင်းတမ်း
(သန်း ၁၀၈ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
State-owned China Datang Company has agreements to
build two dams on the Dapein River near the China border,
involving state-owned Myanmar Electric Power Enterprise.
The dams will have an installed capacity of 408 MW. Total
cost is reportedly 108 million Yuan. ninety percent of the
electricity will be sold to China.
Construction of the Debeyin 1 hydropower station began
on December 19, 2007 and was completed and started
distributing electricity in February 2011. Work continues
on Dam 2.
(၁၁) Dagwin Dam ဒေါင်းဂွင်း ဆည် တည်ဆောက်ထားမှု ရှင်းတမ်း
(သန်း ၉၀၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
The Dagwin, or Lower Thanlwin dam will serve as a
pumped storage facility for the upriver Weigyi dam. Dagwin
is estimated at 56 meters high, with an installed capacity of
Although the Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) has been involved in planning the Dagwin dam
since the early 1980s, in April 2008, three companies from
China signedastrategic cooperation agreement.The cost of
building the Dagwin dam is estimated at $900m.
အထက်ပါ ဆည်များတည်ဆောက်မှု အားလုံးအတွက် နိုင်ငံတော်အားကိုယ်စားမပြုသော ယခင်စစ်အစိုး၇မှ လက်မှတ်ထိုးဆောင်ရွက်ထားပြီး ရရှိလာမည့် အကျိုးမြတ်များအား ၄င်းတို့သာ ခံစားစံစာနိုင်အောင် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကိုပါ ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမည်။ ယခု တည်ဆောက်ထားမှုများအတွက် တ၇ုတ်တခုတည်းနှင့်သာ ၉၀ ရာနုံန်းကျော် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ထားပြီး တရုတ်ပြည်မှ ၂၆ ဘီလီယံ အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင် အန္ဒိယ မှ ၇ ဘီလီယံဒေါ်လာတို့ ဆက်လက် ချေးယူထားသည်ကို ဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုသိရသည်။
ကြိုက်သလောက် ရှယ်နိုင်ကြပါတယ် ၊ အချက်လက် အမှန်များဖြစ်ပါသည်။